Australia oo ka digtay caruurta argagixisada - iftineducation.com
iftineducation.com – Muwaadhiniinta Australia u dhalatay ee ka garab dagaallamaya xooggaga Jihaad doonka ah, ayay suuragal tahay in loo diido daryeellida caruurtooda, sida uu sheegay wasiirka socdaalka ee dalkaasi, Peter Dutton.
Hadalka wasiirka ayaa yimid kaddib markii uu soo baxay war sheegaya, in xaaska iyo caruur uu dhalay muwaadhin Australian ah oo ka garab dagaallamaya Daacish, Khaled Sharrouf, ay doonayaan in ay kusoo laabtaan Australia.
Warbaahinta Australia ayaa sheegaysa in xaaska iyo caruurta oo shan ah, ay doonayaan in ay Australia kusoo laabtaan, iyaga oo gacan ka helaya qoyska dhalay xaaska.
Waxaa qoyska ka mid ah wiil yar, oo la rumeysan ah in uu yahay mid sanadkii hore lagu sawiray, isaga oo madax meyd bani’aadan kor u hayo gudaha dalka Suuriya.
Mr Dutton ayaa sheegay in caruurta hooyadood oo lagu magacaabo, Tara Nettleton, lagu dacwadeyn karo dembiyo argagixisanimo.
Qorshahan cusub ayaa dhalin kara in muwaadhiniinta Australian-ka ah ee taageera argagixisada laga qaado jinsiyada dalkaasi.
War Murtiyeed laga Soo Saara Kulankii Ra’iisul Wasaaraha iyo Axmed Madoobe (Sawirro)